EHLABATHINI JIKELELE amaNgqina kaYehova ayaziwa ngokungabandakanyeki kwimicimbi yezopolitiko nakwiimfazwe zeentlanga. Akholelwa ngokungagungqiyo kwelokuba amele ‘awakhande amakrele awo abe ngamakhuba yaye angaphindi afunde mfazwe kwakhona.’ (Isaya 2:4) Awabaphazamisi abo bakhetha ukuya emkhosini. Kodwa kuthekani ukuba ngenxa yesazela salo iNgqina alivumi ukuya emkhosini, libe ilizwe elihlala kulo liyinyanzelisa le nkonzo? Wehlelwa yiloo nto kanye UVahan Bayatyan oselula.
Iziganeko Eziye Zakhokelela Kwinkundla YaseYurophu
UVahan wazalelwa eArmenia ngoAprili 1983. Ngo-1996, yena namanye amalungu entsapho yakowabo baqalisa ukufunda iBhayibhile namaNgqina kaYehova, yaye xa wayeneminyaka eli 16 ubudala wabhaptizwa. Ngenxa yokufunda kwakhe iBhayibhile, uVahan waba noxabiso olunzulu ngeemfundiso zikaYesu Kristu, kuquka namazwi kaYesu awawathetha kubalandeli bakhe athi angaphathi izixhobo zokulwa. (Mateyu 26:52) Ngenxa yoko, kancinane nje emva kokuba ebhaptiziwe, uVahan kwafuneka enze isigqibo esinzima ebomini bakhe. Umthetho waseArmenia unyanzelisa ukuba abafana baye emkhosini xa besiba neminyaka eli-18 ubudala. Xa bengavumi, basenokohlwaywa ngokuvalelwa ejele iminyaka esenokude ibe mithathu. UVahan wayekufuna ukukhonza abantu belizwe lakhe. Kwangaxeshanye, wayengafuni ukucinezela isazela sakhe esiqeqeshwe ngeBhayibhile. Ngoko ke, yintoni awayenzayo?
Zisuka nje lakufika ixesha lokuba aye emkhosini ngo-2001, uVahan waqalisa ukubhalela abasemagunyeni. Kwezo leta, wachaza ukuba ukuya emkhosini kuyangqubana nesazela sakhe kunye neenkolelo zakhe zonqulo. Kodwa kwangaxeshanye, wachaza ukuba ukulungele ukwenza eminye imisebenzi yasekuhlaleni.
UVahan Bayatyan phambi kwentolongo yaseNubarashen eArmenia
Wade waphela unyaka uVahan ebongoza abasemagunyeni ukuba bamvumele angayi emkhosini ngenxa yesazela sakhe. Noko ke, ngoSeptemba 2002, uVahan wabanjwa yaye kamva wamangalelwa ngokungavumi ukuthobela umyalelo wokuya emkhosini. Waye wagwetywa iinyanga ezili-18 ethothoza ejele. Nakuba kunjalo, umtshutshisi akazange aneliswe seso sigwebo. Emva kwenyanga nje egwetyiwe uVahan, umtshutshisi wafaka isicelo kwinkundla yesibheno sokuba uVahan afumane isigwebo esiqatha kuneso wayesifumene. Wema ngelithi isizathu sokungavumi kukaVahan ukuya emkhosini ngenxa nje yesazela sakhe “asivakali yaye siyingozi.” Inkundla yesibheno yasamkela isicelo somtshutshisi, saza isigwebo sanyuswa saziinyanga ezingama-30.
Naye uVahan wabhenela kwinkundla ephakamileyo yaseArmenia. NgoJanuwari 2003 iNkundla Ephakamileyo yavumelana nesigqibo senkundla engaphantsi. Ngokukhawuleza uVahan wasiwa ejele ukuze aqalise isigwebo sakhe kunye nababulali, abathengisi beziyobisi nezidlwengu.
Iziganeko Kwinkundla YaseYurophu
Ukususela ngo-2001, ilizwe laseArmenia belililungu leBhunga laseYurophu. Ngenxa yoko, abemi belo banelungelo lokufaka izibheno zabo kwiNkundla yaseYurophu Elwela Amalungelo Abantu emva kokuba beye bazityhutyha zonke iinkundla zelizwe labo. Wenza kanye oko uVahan. Kwisibheno sakhe sokuba eye wafunyaniswa enetyala lokungavumi ukuya emkhosini, wathi kwaphulwe uMqathango we-9 okwiSigqibo saseYurophu Samalungelo Abantu. Wacela ukuba ilungelo lakhe lokungavumi ukuya emkhosini ngenxa yesazela sakhe likhuselwe phantsi kwalo mqathango. Le nto ayizange yenziwa ngaphambili.
Ngo-Oktobha 27, 2009, iNkundla yaseYurophu Elwela Amalungelo Abantu yawisa esayo isigwebo. Yathi ngokomthetho okhoyo, inkululeko yesazela kuMqathango we-9 okwiSigqibo saseYurophu Samalungelo Abantu awubakhuseli abo baye bala ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo.
UBayatyan nomfazi wakhe uTsovinar nonyana wabo uVahe
Ngelo xesha, uVahan wayesele wakhululwa kudala entolongweni, yaye wayesele etshatile sele enaye nomntwana. UVahan wadaniswa seso sigwebo. Kwafuneka enze ukhetho lokuba uyaliyeka eli tyala okanye abhenele kwiBhunga Eliphezulu lale nkundla. Wakhetha ukubhena. IBhunga Eliphezulu lamkela kuphela amatyala akhethekileyo, ngoko uVahan wavuya xa elo bhunga lagqiba ekubeni lilihlolisise ngokutsha ityala lakhe.
Ekugqibeleni, ngoJulayi 7, 2011, eStrasbourg, eFransi, iBhunga Eliphezulu leNkundla yaseYurophu Elwela Amalungelo Abantu yakhupha isigwebo sayo. Le nkundla yafikelela kwisigqibo esivuyisayo xa amalungu ayo ali-16 ngaphandle nje kwelinye afumanisa ukuba iArmenia iye yalinyhasha ilungelo likaVahan Bayatyan lokuthobela isazela sakhe xa yamvalela entolongweni kuba engavumi ukungenela umkhosi. Yaba yijaji yaseArmenia kuphela eyam’ entla ixhasa ilizwe layo
UBayatyan ekunye namagqwetha akhe kwiNkundla yaseYurophu Elwela Amalungelo Abantu, ngoNovemba 24, 2010
Kutheni sibalulekile esi sigwebo? Kungenxa yokuba, yayisesokuqala kwimbali yeNkundla yaseYurophu Elwela Amalungelo Abantu ukukujonga njengelungelo elikhuselwayo ukwala ukuya emkhosini ngenxa yesazela. Ngenxa yoko, le nkundla ikujonga njengokunyhasha kwawona malungelo asisiseko kwilizwe elilawulwa yidemokrasi ukuvalelwa ejele komntu owala ukuya emkhosini kuba ethobela isazela sakhe.
INkundla yathetha oku kulandelayo ngokuma kwamaNgqina kaYehova: “Ngaphandle kwamathandabuzo, iNkundla ifumanise ukuba ukungavumi kommangali ukuya emkhosini bekuqhutywa ziinkolelo zakhe zonqulo ezinyanisekileyo yaye ukunyanzelwa ukuba uye emkhosini kungqubana ngokunzulu nezo nkolelo.”
Kwiminyaka engaphezulu kwamashumi amabini, ngamaNgqina kaYehova angaphezulu kwama-450 aye agwetywa eArmenia kuba eye ala ukuya emkhosini. Xa bekubhalwa eli nqaku, ngabafana abangama-58 kwela lizwe abavalelweyo kuba beye bala ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo. Abahlanu kubo baye bavalelwa emva kweso sigqibo siyimbali kwityala likaBayatyan nxamnye neArmenia. * Kwelinye laloo matyala, xa omnye umfana wacela umtshutshisi ukuba achithe ityala lakhe lokwala ukuya emkhosini ngenxa yesazela, umtshutshisi wasikhaba eso sicelo. Kwileta yakhe, umtshutshisi wathi: “Isigwebo esiwiswe ngomhla kaJulayi 7, 2011 yiNkundla yaseYurophu Elwela Amalungelo Abantu kwityala likaBayatyan nxamnye neArmenia, asilichaphazeli eli ityala, ekubeni izicacele nakuthathatha into yokuba la matyala akafani.”
Kwakutheni ukuze umtshutshisi avakalelwe ngolo hlobo? Xa uVahan Bayatyan wayebekwa ityala, sasingekabikho isigwebo sokwenza omnye umsebenzi xa umntu esala ukuya emkhosini. Abasemagunyeni eArmenia bathi kuye kwamiselwa umthetho omtsha ukwenzela abo bangavumiyo ukuya emkhosini benze eminye imisebenzi yasekuhlaleni. Noko ke, loo misebenzi iphantsi kolawulo lomkhosi, ngenxa yoko lo mthetho awusebenzi kuninzi labo bala ukusebenzela umkhosi welizwe ngenxa yezazela zabo.
UVahan Bayatyan uyavuya ngenxa yesigwebo esenza imbali kwityala lakhe. Ngoku esi sigqibo siyabalela abasemagunyeni eArmenia ukuba batshutshise baze bavalele entolongweni abo bavakalelwa kukuba abanakuya emkhosini ngenxa yonqulo lwabo.
Asiyonjongo yamaNgqina kaYehova ukutshintsha inkqubo yezomthetho yalo naliphi na ilizwe. Noko ke, kanye njengokuba uVahan Bayatyan oselula wenzayo, amaNgqina ayawasebenzisa amalungelo awo asemthethweni wamazwe ahlala kuwo. Ngoba? Ukuze akwazi ukuhlala ngoxolo nokuze akwazi ukuthobela ngokukhululekileyo yonke imiyalelo yeNkokeli yawo uYesu Kristu.
^ isiqe. 16 Ababini kubo bagwetywa ngoJulayi 7, 2011, kanye ngala mhla wokuwiswa kwesigwebo kwiNkundla yaseYurophu Elwela Amalungelo Abantu.